मिस वर्ल्डका लागि श्रृंखला खतिवडालाई कसरी भोट गर्ने? | Hamro Patro
मिस वर्ल्डका लागि श्रृंखला खतिवडालाई कसरी भोट गर्ने?
अनि के तपाईँले श्रृंखलालाई भोट गर्नुभयो त ? तपाईँको अमूल्य भोटले अर्को साता ३ करोड नेपालीका लागि खुशीयाली छर्न सक्छ; भोट चैं अाधिकारीक स्रोतबाट मात्र गरौं है !
मिस वर्ल्डमा नेपाली उपस्थितिको अहिलेसम्मको इतिहासमा अत्याधिक चर्चा र वाहवाही प्राप्त गर्न सफल कम्यूनिष्ट राजनीतिक पारिवारीक माहोलमा हुर्कीएकी मकवानपुरकी २२ वर्षिया अार्किटेक्ट श्रृंखला खतिवडाको । विश्व अर्थतन्त्रको शक्तिशाली ठूलो कम्यूनिष्ट देश चीनमा हुँदैगरेको ६८ अाैं संस्करणको यि विश्व सुन्दरी प्रतियोगीतामा यस पटक श्रृंखलाले सबको ध्यान अाफूतिर अाकर्षित गर्न सफल भएकीछिन् ।
अनि के तपाईँले श्रृंखलालाई भोट गर्नुभयो त ? तपाईँको अमूल्य भोटले अर्को साता ३ करोड नेपालीका लागि खुशीयाली छर्न सक्छ; भोट चैं अाधिकारीक स्रोतबाट मात्र गरौं है ! साथै श्रृंखला खतिवडालाई तपाईँको शुभकामना सन्देश के छ ? हौसला सहितको शुभकामना सन्देशका लागि म्यासेज बक्समा गएर कमेण्ट गर्नुहोस् ।